Covid Booster Shots Archives - Isbitaalka Harley Street Clinic London Isbitaalada Tijaabinta Gaarka ah Caafimaadka
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay August 18, 2021 Waxaa qoray Xarunta Caafimaadka ee Harley Street
Tallaalada Kor u Qaadista Covid – welwelka adduunka oo dhan ee ku saabsan xasaanadda muddada -dheer iyo kala -duwanaanshaha cusub ee Covid19 ayaa ku qanciyay waddamada qaarkood inay geeyaan Shots Covid Booster.
Waxaa jira liis sii kordhaya ee kala duwanaanshaha Covid19, dhawaanahanba kala duwanaanshaha Delta ee ku faafay adduunka oo dhan.
Waxaa jira halis ah in kuwani ay yihiin kuwo faafa oo ka khatar badan fayraskii hore ee Covid19.
Inta badan dadka halista ku jira hadda waxay qaateen laba tallaal tallaal oo si buuxda ayaa loo ilaaliyay.
NHS -ta UK waxay ku talinaysaa in barnaamij kasta oo xoojin kara uu bilaabmo bisha Sebtember 2021.
Tani waxay sare u qaadi doontaa ilaalinta kuwa aadka ugu nugul COVID-19 ka hor bilaha jiilaalka.
Hargab / Tallaalada infalawansada waxaa caadi ahaan la bixiyaa dayrta.
The NHS considers that, hadday suurtogal tahay, hab isku dhafan oo ku aaddan bixinta COVID-19 iyo tallaalka infalawansadu waxay taageeri kartaa gaarsiinta iyo sare u qaadista qaadashada labada tallaal.
Waxay aad ugu dhowdahay in dadka ka weyn 50 jirka iyo kuwa halista ku jira la siin doono xoojiye isla waqtiga tallaalka hargabka, iyadoo la filayo in barnaamijku bilowdo horraanta bisha September.
Xog laga helay Caafimaadka Dadweynaha England oo soo jeedinaysa tallaalka Pfizer/BioNTech waa 96% waxtar leh oo tallaalka Oxford/AstraZeneca waa 92% waxtar u leh gelitaanka isbitaalka laba qiyaasood kadib.
Xarumo badan oo Harley Street Clinic ah ayay u badan tahay inay bixiyaan jubbado isku jira si ay gacan uga geystaan ​​ka -soo -bixidda jabinta Covid Booster – fadlan dantaada halkan ka sheeg.
Foomka Tallaalka Gaarka ah ee 'Covid19'
Mu Kala duwan